Izindaba - Izinto ezi-5 Okufakwa Kwakho Kwemvelo / Komkhiqizo Okufanele Ukwenze
Ukupakisha komkhiqizo wakho kuvame ukuxhumana kokuqala umthengi anakho nomkhiqizo wakho. Wazi kanjani ukuthi kwenza umthelela omkhulu? Ngezansi kunezinto ezi-5 okupakishwa komkhiqizo wakho wemvelo / wemvelo okumele ukwenze ukuze kube kuhle, hhayi okuhle nje.
1. Vikela umkhiqizo wakho ekonakaleni nasekonakaleni.
Ukupakisha okuyinombolo eyodwa okwenzela noma yimuphi umkhiqizo ukunikeza ukuvikelwa ngokunikeza isithiyo phakathi komkhiqizo nokungcolisayo kwangaphandle. Lokhu kubaluleke kakhulu emikhiqizweni ethanda uketshezi kanye nemikhiqizo eyenziwe 'mahhala' yesithako esithile sezizathu zokungezwani komzimba noma sezempilo. Ukugcina ubuqotho bomkhiqizo ngamaphakethe wesithiyo sekuya ngokuya kubaluleke njengoba lezi zinhlobo zemikhiqizo zithola ukufunwa okwandayo.
2. Thuthukisa impilo yeshalofu yomkhiqizo.
Uma kukhulunywa ngemikhiqizo yemvelo neyendalo evame ukungabi nezinto zokuvikela, ukupakisha kufanele kwenziwe umsebenzi ophindwe kabili: Akufanele kugcine kuphela ukungcola kwemvelo ngaphandle kwephakeji kepha kufanele kugcine umoya ofanele ngaphakathi kwephakeji. Imikhiqizo ehlukile idinga ukucaciswa okwehlukile kwemvelo ukukhulisa impilo yeshalofu. Izinketho zikhona namuhla ekupakisheni okuvumela izinkampani ukuthi zenze futhi zigcine izindawo eziqondile ngaphakathi kwamaphakeji abo ukuze zenze impilo yeshalofu yomkhiqizo.
3. Dlulisa umkhiqizo nomyalezo wakho.
Ngaphandle kokusebenza okufanele, ukupakisha kufanele futhi kumelele ngokunembile umkhiqizo wakho, umyalezo, amanani nendaba. Amafomethi okupakisha anikezela indawo ephezulu kakhulu yehluzo nokumaketha njengenxusa lomkhiqizo wabo, futhi kaningi njengomthengisi wabo.
4. Nikeza lula kumsebenzisi wokugcina.
Abathengi banamuhla bakhuluma ngemikhiqizo elula egcwalisa futhi ithuthukise izindlela zabo zokuphila ezimatasa. Bafisa imikhiqizo ekupakisheni eguquguqukayo, elula, ephathekayo, futhi enikeza izinketho ezilula njengezinciphisi zezinyembezi nokufakwa kukaziphu.
5. Nika amandla ukusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu.
Ngabe uchitha umkhiqizo omningi ngenxa yokugcwaliswa kwephakeji okungelona noma izivalo zamaphakethe ezivuzayo? Ngabe kunzima ukuvimbela ukukhiqizwa ngokushesha lapho uthola i-oda elikhulu? Ingabe ukuthola kunzima ukubikezela ngokunembile nokwaba izinsiza zomkhiqizo? Abathengi bakho abanaso isikhathi sokulinda emuva, futhi ngeke babekezelele ukupakisha okwenziwe engozini. Ngakho-ke khetha isitayela sephakeji esilinganisela i-aesthetics nokusebenza kahle kokukhiqiza.
6.Pouch izikhwama for the Win
Ama-pouches wokuma we-Flexible stand-up anikela konke okungenhla nokuningi. Le fomethi yokupakisha ebamba ukunakwa inikeza:
Ukusetshenziswa kwezinto ezisimeme nezinakekela imvelo
Iphakheji edinga izinsiza ezimbalwa ukudala, ukugcina nokuthumela
Indwangu enhle yokumaketha, enikeza isithombe somkhiqizo osezingeni eliphakeme, wanamuhla
Iphakheji elimi lingasiziwe, elisebenza njengebhodi laso lokukhangisa
Izinketho zokusebenziseka kalula zomsebenzisi ezinjengeziphu kanye namanothi wokudabula
Ukuvikelwa okukhulu komkhiqizo wakho wemvelo / wemvelo ngempilo eshalofini efanelekile
Izinketho zemishini yokupakisha esheshayo
Gcwalisa i-Rotary bese ubeka uphawu ngezikali eziqondile zamaGranules
Ifanele izinto ze-garin, njengembewu ye-Melon, amantongomane, uswidi, omisiwe, i-suger, usawoti, ubhontshisi wekhofi, amakhukhi, i-crystal monosodium glutamate nezinye izinto eziqinile zokupakisha okuzenzakalelayo.
Izikhwama zama-stand-up premade, ezaziwa nangokuthi ama-Doypacks, bezilokhu ziphazamisa kakhulu izimboni eziningi, kusuka kusobho nokudla okulula kuya ekhofi naseziphuzweni. Isikhathi sokucabanga ukuthi le fomethi entsha yokupakisha ingayenzani kumkhiqizo wakho, ukukhiqizwa, kanye nomugqa ophansi. Funda kabanzi ngemishini yokupakisha izikhwama zangaphambi kwesikhathi eGaoge